Izindaba - I-PSA oxygen generator ibamba iqhaza elibalulekile ezimbonini
I-PSA oxygen generator idlala indima ebalulekile ezimbonini
I-PSA oxygen generatorisebenzisa i-zeolite ngesihlungo samangqamuzana njenge-adsorbent, futhi isebenzisa umgomo wokudonswa kwengcindezi nokwehliswa kokunciphisa ukucindezela ukwenza i-adsorb nokukhulula umoya-mpilo emoyeni, ngaleyo ndlela kwehlukaniswe i-oxygen nemishini ezenzakalelayo. Ukwehlukaniswa kwe-O2 ne-N2 ngesihlungo se-zeolite samangqamuzana kusekelwe kokwehluka okuncane kububanzi obushukumisayo bamagesi amabili. Ama-molecule we-N2 anesilinganiso sokusabalalisa esisheshayo kuma-micropores we-zeolite sieve yamangqamuzana, futhi ama-molecule e-O2 anesilinganiso sokusabalalisa kancane. Ngokusheshisa okuqhubekayo kwenqubo yezimboni, isidingo semakethe seAma-generator omoya we-PSA iyaqhubeka nokwanda, futhi imishini idlala indima ebalulekile ezimbonini.
I-Hangzhou OuRui Air Separation Equipment Co., Ltd.inguchwepheshe umkhiqizi wokwehlukaniswa komoya kwe-cryogenic, Idivayisi yokukhiqiza i-VPSA oksijini, icindezelwe idivaysi yokuhlanzwa komoya, ukukhiqizwa kwe-PSA nitrogen, idivaysi yokukhiqiza i-oxygen, idivayisi yokuhlanzwa kwe-nitrogen, ulwelwesi lokuhlukanisa ukukhiqizwa kwe-nitrogen nedivayisi yokukhiqiza umoya-mpilo, ugesi. Womoya ukulawula valve. Isilawuli lokushisa valve. Sika amabhizinisi wokukhiqiza i-valve.
1. Mayelana nokusetshenziswa kwe-oxygen generator emkhakheni womlilo ocebile we-oxygen
Okuqukethwe kwe-oxygen emoyeni kungama-≤21%. Ukushisa kukaphethiloli kuma-boilers ezimboni kanye nasezinsizeni zezimboni nakho kusebenza ngaphansi kwalokhu okuqukethwe emoyeni. Ukuzijwayeza kukhombisile ukuthi lapho inani legesi oksijini emlilweni obilayo lifinyelela ngaphezu kwama-25%, ukonga amandla kufinyelela kuma-20%; isikhathi sokushisa sokuqala sokushisa senziwa mfushane ngo-1 / 2-2 / 3. Ukunothiswa komoya-mpilo ukusetshenziswa kwezindlela zomzimba zokuqoqa umoya-mpilo emoyeni, ukuze okuqukethwe kokunothisa umoya-mpilo kugesi oqoqiwe kube ngama-25% -30%.
2. Mayelana nokusetshenziswa kwe-oxygen oxygen emkhakheni wokwenza iphepha
Ngokuthuthuka kwezwe kwezidingo zokuvikelwa kwemvelo ngezinqubo zokwenza amaphepha, izidingo zetshalazi elimhlophe (kufaka phakathi uginindela wokhuni, uginindela womhlanga, kanye nogalo loqalo) nazo ziyanda. Umugqa wokuqala wokukhiqiza i-chlorine we-bleached kufanele uguqulwe kancane kancane ube ulayini wokukhiqiza uginiga ongena-chlorine-free; Ulayini omusha wokukhiqiza uginindela udinga inqubo yokungena kwe-chlorine ngaphandle kwe-chlorine, futhi ukugaya amakhaladi akudingi i-oxygen ehlanzekile ephezulu. I-oxygen ekhiqizwa yi-pressure jika adsorption oxygen generator iyahlangabezana nezidingo, ezonga imali nezemvelo.
3. Mayelana nokusetshenziswa kwe-oxygen oxygen emkhakheni wokuncibilikisa okungekho kwensimbi
Ngokulungiswa kwesakhiwo sezimboni sikazwelonke, ukuncibilikisa okungekho kwensimbi kuthuthuke ngokushesha eminyakeni yamuva. Abakhiqizi abaningi baqale ukusebenzisa ingcindezi yokujikisa i-adsorption i-oxygen generator lapho kuqhutshwa inqubo yokushaywa kwe-oxygen ezansi yomthofu, ithusi, i-zinc, ne-antimony, nakuma-smelters asebenzisa i-oxygen leaching yegolide ne-nickel. Ukusetshenziswaimakethe ye-PSA oxygen generator inwetshiwe.
Ikhwalithi yesisefo samangqamuzana esisetshenziswe ku- I-PSA oxygen generatorithatha isikhundla esikhulu. I-sieve yamangqamuzana ingumongo wokucindezelwa kwe-adsorption. Ukusebenza okuphezulu nempilo yesevisi yesihlungo samangqamuzana kunomthelela oqondile ekusimeni kwesivuno nobumsulwa.